WebP: Mitantana ny endrika sary loharano misokatra ao amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
WebP: Tantano ny fisokafan'ny sary loharano misokatra ao amin'ny GNU / Linux
WebP: Tantano ny fisokafan'ny sary loharano misokatra amin'ny Linux
WebP Is a image format de loharanom-baovao misokatra namboarin'i Google taona maro lasa izay, hanatsarana ny fitantanana sary rehefa manao azy ireo maivana fihazonana a Kalitao tsara indrindra, mba hahatonga ny fandefasana sy ny fijerena tranonkala haingana kokoa.
Nanomboka teo, hoy ny vaovao fenitra misokatra sy hafa amin'ny endrika malaza sy mahazatra, toy ny JPG, PNG y GIF, dia nanjary be mpampiasa, tsy amin'ny Internet ihany fa amin'ny fampiharana, toy ny WhatsApp y telegrama mamorona ny Stickers, noho ny tombony maro azo.
Taona maro lasa izay, indrindra tamin'ny Janoary 2013, ao amin'ny Blog FromLinux miresaka ny endrika no resahanay WebP ary amin'ny fomba fampiharana ny patch amin'ny GIMP. Hatramin'io fotoana io dia 5 taona taorian'ny namoronana ny endrika WebP io dia tsy nampiharina tamin'ny alàlan'ny fampiharana an'io GNU / Linux.
Ahoana ny fomba fanokafana na famoronana rakitra WebP amin'ny GIMP
Amin'izao fotoana izao, ny fomba voalaza etsy ambony dia tsy ilaina intsony, satria ny fonosana «gimp-webp» tafiditra ao amin'ny maro trano fitahirizana amin'ny maro GNU / Distros Linux. Ary ny fanampiana amin'ny alàlan'ny tranomboky dia misy amin'ny sasany eo ambanin'ny fonosana «libwebp5» o «libwebp6».
1 WebP: endrika loharano misokatra
1.1 Thumbnail ny sary WebP ao Thunar
1.2 Jereo sy ovao ny sary WebP
1.3 Fitaovana an-tserasera hamoronana sary (hanova) ho WebP
WebP: endrika loharano misokatra
Ny format WebP manana tranokala ofisialy izay ilazana azy hoe:
"WebP dia endrika sary maoderina izay manome famatrarana fatiantoka avo lenta sy lossy ho an'ny sary ao amin'ny tranonkala. Amin'ny fampiasana WebP, ny webmaster sy ny developer web dia afaka mamorona sary kely kokoa sy manankarena izay mahatonga ny tranonkala haingana kokoa.".
Ho fanampin'izay, manasongadina fa:
"Ny sary tsy misy fatiantoka WebP dia 26% kely kokoa raha oharina amin'ny PNG. Ny sary Lossy WebP dia kely kokoa 25-34% noho ny sary JPEG azo oharina miaraka amin'ny naoty SSIM. Ny Lossless WebP dia manohana ny mangarahara (fantatra koa amin'ny fantson'ny alpha) amin'ny vidiny 22% bytes fanampiny. Ho an'ireo tranga izay eken'ny lossy RGB compression, lossy WebP koa dia manohana ny mangarahara, mazàna manome 3 × habe kely kokoa raha oharina amin'ny PNG".
Thumbnail ny sary WebP ao Thunar
Raha ny ahy, rehefa mampiasa kinova novaina an'ny MX Linux, izay mampiasa ny Tontolo iainana Desktop XFCE raha ny tena izy, ny fomba nampiasaina tamim-pahombiazana mba hanehoana ireo sary kely ao amin'ny Thunar File Explorer dia izao manaraka izao:
Mamorona rakitra antsoina «webp.thumbnailer» miaraka amin'ireto baiko baiko manaraka ireto:
Ampidiro ity atiny manaraka ity ary tahirizo ary akatona ny fisie noforonina:
Atsaharo ny session ho an'ny mpampiasa ary andramo amin'ny fisokafana Thunar hijerena ny sary kely momba ny sary WebP.
Jereo sy ovao ny sary WebP
Ho an'ny asa toy izany dia mamporisika anao hampiasa ny mpijery sary Nomacs ary ny mpamoaka sary XnConvert. Tsy ny rindran-tsary rehetra dia mbola tohanana miaraka amin'ny endrika WebP. Ny sasany amin'izy ireo dia mbola tsy azoko atao ny mijery azy ireo sy manitsy ireo sary WebP es GPicView e Inkscape.
Fitaovana an-tserasera hamoronana sary (hanova) ho WebP
Raha misy, tsy manana eo am-pelatanana GNU / Linux fampiharana tsara ho an'ny asa toy izany, misy foana ny fitaovana tsara maro an-tserasera hanovana zavatra maro, toy ny endrika fisie sary. Fa natao manokana ho an'ny sary WebP mamporisika anao izahay manandrana: Niova fo.
Farany, raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba endrika ianao WebP no ampiasaina hamoronana Taratasy telegram sy WhatsApp, kitiho ny manaraka rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny endrika sary loharano misokatra antsoina hoe «WebP» noforonin'i Google taona maro lasa izay, ary momba ny fomba fitantanana sary misy an'ity endrika ity GNU / Linux; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WebP: Tantano ny fisokafan'ny sary loharano misokatra ao amin'ny GNU / Linux
WebM: Tantano ny endrika horonantsary misokatra amin'ny GNU / Linux
Ireo mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny Ubuntu